Nehemia 13 | Baiboly | Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao
13 Tamin’izay andro izay dia novakina+ teo anatrehan’ny vahoaka ny bokin’i+ Mosesy. Voasoratra tao fa tsy mahazo miditra ho anisan’ny fiangonan’Andriamanitra ny Amonita+ sy ny Moabita,+ mandritra ny fotoana tsy voafetra.+ 2 Tsy mba nitsena ny zanak’Israely mantsy izy ireo na nanome mofo+ sy rano+ azy. Nanakarama an’i Balama+ kosa izy ireo mba hanozona azy,+ nefa novan’Andriamanitray ho tsodrano ilay ozona.+ 3 Koa raha vao ren’ny vahoaka ilay lalàna,+ dia nesorin’izy+ ireo tsy ho anisan’ny Israely ny hafa firenena rehetra. 4 Talohan’izay, i Eliasiba+ mpisorona izay havan’i Tobia+ sady mpiandraikitra ny efitra fisakafoana+ tao an-tranon’Andriamanitray, 5 dia efa nanao efitra fisakafoana+ malalaka ho an’i Tobia. Tao anefa taloha no fametrahana ny fanatitra varimbazaha,+ sy ny ditin-kazo manitra, sy ny fitaovana, sy ny fanomezana ho an’ny mpisorona, ary ny ampahafolon’ny varimbazaha sy ny divay vaovao+ ary ny menaka,+ izay samy natao ho an’ny Levita+ sy ny mpihira ary ny mpiandry vavahady. 6 Tsy teto Jerosalema aho nandritra izany fotoana izany, satria niverina tany amin’i Artaksersesy+ mpanjakan’i Babylona, tamin’ny taona faharoa amby telopolo+ nanjakany. Niera taminy aho mba handeha taoriana kelin’izay,+ 7 ka tonga teto Jerosalema. Dia hitako ny zava-dratsy nataon’i Eliasiba+ tamin’ny nanaovany efitrano ho an’i Tobia,+ teo an-tokotanin’ny tranon’Andriamanitra.+ 8 Tena nahasosotra ahy izany,+ ka natsipiko+ tany ivelan’ny efitra fisakafoana daholo ny fanak’i Tobia. 9 Avy eo dia nasaiko nodiovina+ ireo efitra fisakafoana,+ ka naveriko tao indray ireo fitaovana+ tao an-tranon’Andriamanitra sy ny fanatitra varimbazaha ary ny ditin-kazo manitra.+ 10 Ary hitako fa tsy nomena ny anjaran’ny+ Levita, ka nandositra tany amin’ny sahany avy ny Levita sy ny mpihira, izay nanao ny asa.+ 11 Koa nomeko tsiny+ ny solontenam-panjakana+ hoe: “Nahoana no dia natao tsirambina ny tranon’Andriamanitra?”+ Dia novoriko ny Levita ka nasaiko nijoro teo amin’ny toerany avy. 12 Ary ny Joda rehetra kosa nanatitra ny ampahafolon’ny+ varimbazaha+ sy ny divay vaovao+ ary ny menaka,+ tao amin’ny trano fitehirizana entana.+ 13 Dia nasaiko niandraikitra ny trano fitehirizana entana i Selemia mpisorona, sy Zadoka mpanao dika soratra, sy Pedaia izay anisan’ny Levita, ary teo ambany fahefan’izy ireo i Hanana zanak’i Zakora, zanak’i Matania.+ Olona mendri-pitokisana ireo,+ ary adidiny ny nizara+ ny anjaran’ireo rahalahiny. 14 Mba tsarovy aho,+ ry Andriamanitro ô, noho izany zavatra izany. Ary aza hadinoina+ ny hatsaram-panahy feno fitiavana nasehoko momba ny tranonao+ sy ny fanompoana natao tao. 15 Tamin’izany no nahitako olona sasany tao Joda nanitsakitsaka voaloboka tao anaty lavaka famiazana azy, tamin’ny andro sabata.+ Nisy koa nitondra varimbazaha miavosa natainginy+ teo ambony ampondra,+ ary nisy nitondra divay sy voaloboka sy aviavy+ ary izao karazana entana rehetra izao, nankao Jerosalema tamin’ny andro sabata.+ Koa nampitandrina azy ireo aho tamin’ny andro nivarotany sakafo. 16 Nisy nonina tao an-tanàna koa ny olona avy any Tyro,+ izay nitondra trondro sy entam-barotra+ isan-karazany, ary nivarotra izany tamin’ny taranak’i Joda sy tao Jerosalema tamin’ny sabata. 17 Koa nomeko tsiny ny olona ambony+ tao Joda hoe: “Inona izao ratsy ataonareo izao, ka anazimbazimbanareo ny andro sabata? 18 Tsy efa izao ihany ve no nataon’ny razanareo?+ Izany no nahatonga an’Andriamanitsika hamely antsika sy ity tanàna ity amin’izao loza rehetra izao!+ Vao mainka anefa ianareo mampitombo ny fahatezerana mafy mihatra amin’ny Israely, noho ianareo manazimbazimba ny sabata.”+ 19 Ary raha vao nihamaizina ny teo amin’ireo vavahadin’i Jerosalema, talohan’ny sabata, dia nasaiko nohidiana ny vavahady+ ka tsy navelako hosokafana raha tsy taorian’ny sabata. Ary nisy mpanompoko nasaiko nijanona teo am-bavahady, mba tsy hisy entana ho tafiditra amin’ny andro sabata.+ 20 Koa efa indroa ireo mpivaro-mandeha sy mpivarotra entana isan-karazany no natory teo ivelan’i Jerosalema. 21 Dia nampitandremako+ izy ireo hoe: “Nahoana ianareo no matory eto anoloan’ny manda? Raha mbola manao an’izao ianareo, dia hosamboriko.”+ Koa tsy tonga tamin’ny sabata intsony izy ireo nanomboka tamin’izay. 22 Nilazako koa ny Levita+ mba hanadio+ ny tenany foana, ka ho avy hiambina ny vavahady+ mba hanamasinana+ ny andro sabata. Tsarovy+ koa izany, ry Andriamanitro ô, noho ny amiko, ary iantrao aho fa be hatsaram-panahy feno fitiavana+ ianao. 23 Tamin’izany koa no nahalalako fa nisy Jiosy nanambady+ vehivavy asdodita+ sy amonita ary moabita.+ 24 Ary niteny asdodita ny antsasaky ny zanak’izy ireo. Tsy nisy nahay fiteny jiosy ny ankizy rehetra,+ fa fitenin’ny firenen-kafa kosa no hainy. 25 Dia nanome tsiny azy ireo aho, ka nanozona azy+ sy nikapoka ny lehilahy sasany+ ary nanongotra ny volony sady nampianiana azy tamin’ny anaran’Andriamanitra,+ sy niteny hoe: “Aza manome ny zanakareo vavy ho vadin’ny zanany lahy, ary aza maka ny zanany vavy ho vadin’ny zanakareo lahy na ho vadinareo.+ 26 Tsy izany ve no nahatonga an’i Solomona mpanjakan’ny Israely hanota?+ Tsy nisy mpanjaka toa azy teo amin’ny firenena maro.+ Ary tia azy ny Andriamaniny,+ ka nanao azy ho mpanjakan’ny Israely manontolo. Na izy aza anefa, voataonan’ny vehivavy hafa firenena hanota.+ 27 Tsy mampino mihitsy izao zavatra ratsy be nataonareo izao! Nivadika tamin’Andriamanitsika ianareo ka nanambady vehivavy hafa firenena.”+ 28 Vinantolahin’i Sanbala+ Horonita+ ny iray tamin’ny zanak’i Joiada,+ zanak’i Eliasiba+ mpisoronabe, ka noroahiko tsy ho eo anatrehako.+ 29 Tsarovy, ry Andriamanitro ô, fa nolotoin’izy+ ireo ny asa fisoronana, ary nolotoiny koa ny fifanekena+ momba ny fisoronana sy momba ny Levita.+ 30 Nodioviko+ ho afaka tamin’izay rehetra an’ny firenen-kafa ny vahoaka, ary nomeko anjara raharaha ny mpisorona sy ny Levita, ka samy nanao ny asany.+ 31 Nalamiko koa ny famatsiana kitay+ amin’ny fotoana voatondro sy ny voaloham-bokatra. Mba tsarovy aho,+ ry Andriamanitro ô, ka aoka hahazo sitraka aminao.+